Global Voices teny Malagasy » Fifidianana Filankevi-Pitantanana GV 2017 : Zara Rahman · Global Voices teny Malagasy » Print
Fifidianana Filankevi-Pitantanana GV 2017 : Zara Rahman
Voadika ny 15 Marsa 2017 4:59 GMT 1	 · Mpanoratra Zara Rahman Nandika (fr) i Suzanne Lehn, Sylvia Aimée
Tompon'ny Sary: Fiona Krakenbürger
Mpanoratra aho, mpikaroka ary mpiaro ny zon'ny vehivavy izay manana razambe ao UK, any Bangladesh ary ao Alemana. Nivezivezy ary niasa tany amina firenena telopolo mahery aho, ary miresaka teny 4 misosa tsara (ary roa fanampiny fa tsy dia tena misosa tsara!). Ny lahatsoratra vao haingana tena ireharehako dia ity iray ity, miresaka ny fiantraikan'ny teknolojiam-pifandraisana tamin'ny fifindramonin'ny taranaka. 
Ny ankamaroan'ny asako dia mifototra amin'ny fianarana sy ny asa momba ny fiovàna sosialy sy ny teknolojia – amin'ny fampiroboroboana ny lalàna mikasika ny fahazoam-baovao na ny fahalalahan'ny angodrakitra natao ho an'ny daholobe ; ny asa momba ny fahaizamanao eo amin'ny resaka angon-drakitra ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena ary eny amin'ireo mpanao gazety ; ary vao haingana toy ny mpikaroka manokana amin'ny resaka angon-drakitra tomponandraikitra sy ny toetra iombonany  amin'ny fiovana ara-tsosialy. Raha atao amin'nyteny roa, mahaliana ahy ny fifanenan'ireo fotodrafitrasam-pahefana, teknolojia ary ny filazambaovao
Izaho sy ny GV
Tamin'ny 2015 ny lahatsoratro ho an'i GV voalohany, fa efa hatramin'ny ela aho no mpamaky mazoto (ary, miaky aho fa nivezivezy teo amin'ireo lisitra famoahana). Ny fahatsapako ho toy ny any an-tranoko eto, tao anatin'ny fotoana fohy dia fohy, dia manaporofo ny toetra mahay mandray olona ananan'ny fiarahamonina GV.
Nanomboka nanoratra aho satria tsy nisy ireo lahatsoratra tiako ho vakiana: raha mazava kokoa, ny fanadihadihana ny fomba niraisan'ny fiovàna politika tany Bangladesh sy ny fampiasan'ny fanjakana ny teknolojia mba hanarahana maso ny fanoherana. Tena mankasitraka tanteraka ny nanomezan'ny GV ahy ity sehatra ity aho. Nanomboka teo, tena nandany fotoana kokoa aho nanoratra ho an'ny Advox mikasika ny zo niomerika ao Bangladesh.
Miaraka amin'ireo olona mahafinaritra tao amin'ny atrikasa GVeX tamin'ny 2016
Tamin'ny taona lasa teo, nandray anjara tamin'ilay atrikasa tsara be Global Voices Exchange aho, izay tena nianarako zavatra betsaka, ary nanomboka tamin'izay, ireo resaka nifanaovako tany dia mitantana ny asako ankehitriny. Miaraka amin'ireo torohevitr'i Georgia, nanoratra andrana manokana vitsivitsy koa tao amin'ny The Bridge . Hatramin'ny naha mpikambana ahy, nanana fahalalahana hahafantatra GVers maro avy amina firenena maro samihafa aho, ary tiako ilay rohy tonga dia mampifandray avy hatrany vantany vao mihaona mivantana amina namana GV.
Manaraka ny hetsika NewsFrames  hatramin'ny niforonany aho, ary efa nampiantrano atrikasa ho an'i Connia tamin'ny vao fiandohan'ilay tetikasa mba hanampiana amin'ny fieritreretana mikasika ny mety ho fivoarany. Mihevitra aho fa misy tombontsoa lehibe ho an'ny GV ao anatin'ny fiarahamiasa amina hetsika haino aman-jery hafa tsy manana karazana fiarahamonina maro toa isika.
Misolo tena ireo mpilatsaka an-tsitrapo
Ao amin'ny fiainako arak'asa, ny ankamaroan'ny fotoanako dia laniako amin'ny fieritreretana momba ny fampahalalana, ny fahefana sy ny fifampitokiana -sy ny fiantraikan'ireo eo amin'ny fiarahamonina. Ao an-tsaiko, mitana anjara asa tena tsy manam-paharoa ny GV amin'ny fihaonan-dàlana amin'ireo hafa izay tsy inona fa ho lasa sarobidy kokoa. Toy ny nosoratako tamin'ny volana Desambra lasa teo, resy lahatra aho fa ankoatra ny fanavaozana, mila fiarahamonina azo atokisana toy ny GV ihany koa ny fanaovana gazety . Niresaka ny hery maro navoitran'ny GV tato anatiko aho tao anatin'izany, ary ny antony hinoako fa tena ilaina anio sy ho mandrakizay ny GV.
Mba hirosoana hatrany ao anatina vanim-potoana fiovana ara-politika lehibe erantany, fitomboan'ny fifindramonina, sy fihenan'ny fifampitokiana eny amin'ireo andrim-panjakana, tadiaviko ny hitrandraka ny fahasamihafan'ny tambajotrantsika mba hahatakarana ny fomba hahafahan'ny GV miady amin'ireo fiovana ratsy izay hitantsika erantany. Inona ny fiovana iriantsika hoentin'ny GV eto aminìizao tontolo izao? Inona no ilaintsika hahatongavana amin'izany?
Tiako ny modely ankehitriny fikarohana dom-berina avy amin'ny fiarahamonina mialohan'ny fivoriana stratejikan'ny GV, ary manontany tena aho momba izay fomba hisintonana ny tsara indrindra avy amin'ny fiarahamonintsika ao anatin'ny fifanajana sy ny fahaizana mandanjalanja. Amin'ny maha mpisolo tena ny mpilatsaka an-tsitrapo ahy, heveriko fa andraikitro lavitra be ny mihaino ny sosokevitra sy ny zavatra manahirana ity fiarahamonintsika izay tena be karazana mahafinaritra ity, hanao ny fandravonana ary hanolotra azy ireo ho an'ny ambin'ny filankevitra amin'ny fomba mivaingana sy mahasoa. Inoako fa efa nomanin'ny traikefako arak'asa ho amin'izany aho.
Tsy azo lavina fa henjana ny tontolon'ny haino aman-jery amin'izao fotoana izao. Misy fiantraikany amin'ny endrika sy ny votoatin'ny famokarana an-gazety ireo modely ara-toekarena mifototra amin'ny dokam-barotra, ary eo anivon'ireo karazana làlam-pivoarana vitsy hitako, misy ireo modelim-panaovana gazety tsy maka tombony toy ny Global Voices. Manana ny tombontsoa miasa eo anilan'ireo olona maro mieritreritra betsaka sy miasa ho an'ny vahaolana amin'ireo olana ireo aho, ary tsy ho haiko ny hilaza hoe impiry aho tato anatin'ny taona vitsivitsy no nanondro ny fitambarana tsy mampinon'ny antontan-tsoratry ny GV ao anatin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto ho toy ny ohatra fomba fanao tsara ho an'ny hafa.
Fanampin'izany, te hampiasa ny asan'ny mpisolo tenan'ny mpilatsaka an-tsitrapo aho mba hahazoana antoka fa hanana olona mahafinaritra azony hiresahana ireo mpilatsaka an-tsitrapo, toerana hizarana ny ahiahy sy ny olana atrehanao, ary olona mba hamoaka ireo hevitra sy hieritreritra momba ny fomba azon'ny GV handraisana anjara mba hiresahana mikasika ireny olana ireny.
Farany, ary tena izany no manan-danja indrindra angamba, tiako ny milaza fa voninahitra lehibe ho ahy ny maha voatendry ahy fotsiny ho kandidà amin'ny fisoloana tena ireo mpilatsaka an-tsitrapo ho an'ireo fifidianana vaovao ao amin'ny Filankevitra. Mahavariana ilay lisitry ny kandidà. Tena mety ho faly ny ho soloin'ny iray, na iza na iza amin'izy ireo tena aho , ary raha voafidy aho, hanao izay fara-heriko aho mba ho mendrika izany fitakiana avo lenta izany.
Raha toa ka te hanohy ny firesahana ny mikasika izay rehetra voalaza teo ianao, mifandraisa amiko ! Ao amin'ny Twitter aho @zararah , na andefaso imailaka  !
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/15/96716/
 ity iray ity, miresaka ny fiantraikan'ny teknolojiam-pifandraisana tamin'ny fifindramonin'ny taranaka.: http://reallifemag.com/close-calls/
 angon-drakitra tomponandraikitra sy ny toetra iombonany: http://responsibledata.io/
 Global Voices Exchange : https://rising.globalvoices.org/exchange/
 ny fanavaozana, mila fiarahamonina azo atokisana toy ny GV ihany koa ny fanaovana gazety: https://globalvoices.org/2016/12/19/in-addition-to-innovation-journalism-needs-trusted-communities/
 modely ankehitriny fikarohana dom-berina avy amin'ny fiarahamonina : https://community.globalvoices.org/2016/10/strategy-planning-and-the-future-of-gv/
 andefaso imailaka: https://community.globalvoices.org/author/zara-rahman/